Wafdi ka socda Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya oo Garoowe lagu soo dhaweeyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wafdi ka socda Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya oo Garoowe lagu soo dhaweeyay “SAWIRRO”
Wafdi balaaran oo uu horkacayo sii haaya xilka Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mudane C/rixmaan Iidaan Yoonis, oo ay qayb ka yihiin xildhibaano, masuuliyiin ka tirsan wasaaraha warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad gobaleedyada iyo Ururada Saxaafadda ayaa gaaray magaalada Garowe iyadoo ay soo dhoweeyeen Masuuliyiin ka tirsan dowlad Gobaleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Masuuliyiintaan ayaa ka qaybgali doona Shirka Madasha Wasaaradaha Warfaafinta Dalka iyo Gobalka Banaadir oo lagu wado inuu ka furmo magaalada Garowe ee Xarunta Puntland.
Sii hayaha xilka wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlada Federalka ah ee Soomaaliya ahna wasiir ku xigeenak Wasaaradda Mudane C/rixmmaan Iidaan Yoonis ayaa ka mahad celiyay sida loogu soo dhoweeyay magaalada Garowe.
Mudane C/rixmaan Iidaan Yoonis ayaa sidoo kale sheegay in magaalada Garowe uu ka furmi doono shir muhiim ah oo ay yeelanayaan Wasaaradaha Warfaafinta Dalka iyo Gobalka Banaadir, kaas oo daba socda shir horay loogu qabtay magaalada Muqdisho.
Shirkaan oo lagu wado inuu socdo mudo Afar maalin ah ayaa inta uu socdo waxaa laga hadli doonaa Horumarinta Warbaahinta Dalka iyo sidii leesaga kaashan lahaa in Bulshada Soomaaliyeed la gaarsiiyo Fariimo sax ah.
Heegan Oo Kulankii Labaad Horyaalka Laga Adkaaday